Xuquuqda dhalinyarada Yamanida - Xuquuqaha Helitaanka Caalamiga ah
Waxaan rabaa in gabdhahaygu waxbarto bilow ilaa dhamaad. Waxaan ka qoomameynayaa inaanan awoodi karin inaan wax barto bilowgii. Haddii Eebbe idmo, waxay gaari doonaan wixii aanan ku guuleysan inaan naftayda ku guuleysto."
- Mona, Gabadha Alhabil (Filimka Changemaker)
Intii lagu guda jirey kala guurka siyaasadeed ee Yemen, ayaa loo yaqaan 'Equal Access International' awood u siisay dhalinyarada iyada oo loo marayo sheeko-sheeko. Laga soo bilaabo 2013-2015, iyada oo la soosaarayo barnaamijyada raadiyaha, bandhigyada tiyaatarka, iyo dokumentiyada yaryar, EAI waxay ku dhiirigelisay dhalinyarada inay si aad ah uga qeybgalaan bulshooyinka kala guurka ah. Iyada oo loo marayo goleyaasha dhalinyarada, aqoon-isweydaarsiga, iyo kooxaha dhagaysiga, iyaga oo taageero ka helaya Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka, Xafiiska Xiriirka Iskaashiga Bariga Dhexe (MEPI), XUQUUQDA XUQUUQDA waxay qeexday xuquuqda aadanaha duruufaha casriga ah waxayna ku dhiirigelisay dhalinyarada inay hadlaan.
Iyada oo loo marayo barnaamijyo taxane ah oo dhalinyaro ah oo laga soo saaray raadiyaha, ayaa ah aqoon yahan hogaamiyayaal dhalinyaro ah oo tababaran, dhageysanaya kooxaha wada hadalka, goleyaasha dhalinyarada firfircoon, bandhigyada masraxa, iyo doodaha bulshada lagu wareejinayo, Barnaamijka 'XUQUUQDA' waxay ka caawisay Yemen inay noqoto bulsho kaqeybqaadata badan.
Hindisahan, oo ay taageerayaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Xafiiska Xiriirka Iskaashiga Bariga Dhexe (MEPI), wuxuu awood u siinayaa dhalinyarada reer Yemen inay difaacaan xuquuqdooda ayna kor u qaadaan daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Iyada oo lagu taageerayo jiil dhalinyaro ah oo u heellan xukunka sharciga iyo la xisaabtanka dowladda, EAI waxay rajeyneysay inay ka caawiso dibuhabaynta dhalinyarada saameyn ku yeelata nolosha jiilalka mustaqbalka.
Barnaamijka 'Xuquuqda' XUQUUQDA wuxuu ku daray qaybaha soo socda waxqabadyada:
Soosaarista iyo Baahinta Xuquuqda Sharciga iyo Barnaamijyada Raadiyaha Sharciga: Taxane taxane ah oo raadiyooyin ah oo diirada lagu saaray xuquuqda sharciga iyo xukunka sharciga sharciga ayaa loo sameeyay taxanaheena raadiyaha dhalinyarada ah "Aan Noqno Mid Wadajir ah." Mawduucyada waxaa kamid ah wacyigelinta dhalinyarada ee ku saabsan xuquuqda sharciga, tusaalooyin dhiirrigelin ka qeybqaadashada madaniga ah, xushmeynta xuquuqaha kuwa kale, iyo doorka shaqsiyaadka iyo mas'uuliyiinta dowladda ee ilaalinta iyo difaaca xuquuqdaas.
Tababbarka Hoggaaminta ee Hoggaamiyeyaasha Dhallinyarada: Hoggaamiyeyaasha dhalinyarada ee ka kala socda lix maamul goboleed ayaa loo tababaray inay abaabulaan isku wareejinta bulshada, fududeynta dhageysiga kooxaha wada hadalka, iyo hogaaminta ficilada wadajirka ah ee deegaanka. Dhalintani waxay sidoo kale baranayaan sida qofku u noqon karo gudoomiye ama hoggaamiye dhalinyaro dhalinyaro heer qaran ah.
Kooxaha Dhageysiga iyo Doodayaasha Dhalinta (LDG): LDGs waxaa laga sameeyay lix gudoomiye gobol oo Yemen ah. Kuwaas oo ay hogaaminayeen isudiyaarayaal tababaran, kooxahani waxay fursad siinayeen dhalinyarada inay la kulmaan asxaabtooda isla markaana ka wada hadlaan barnaamijyada raadiyaha iyo mowduucyada laxiriira sida xuquuqaha sharciga, xukunka sharciga, iyo kaqeybgalka bulshada. Iyaga oo ka wada hadlaya sida arrimahani u saameeyaan noloshooda maalinlaha ah, kooxahani waxay sidoo kale tilmaami doonaan talaabooyinka maxalliga ah ee ay qaadi karaan si ay isbedello wanaagsan uga dhex sameeyaan bulshooyinkooda.
Bandhigyada Masraxa: Dhalinta ka qeyb qaadata dhageysiga iyo doodaha kooxda ayaa sidoo kale abuuray riwaayado. Dhalinyaradan Yamaanida ahi waxay qoreen, haggeen, isla markaana xiddig ka dhigteen riwaayado gaagaaban oo kusaabsan xuquuqaha sharciga iyo jinsiyadda wanaagsan ee tartan masrax qaran. Wadaagida iyo waxbarida dadka kale, dhalintu waxay ku kasbadaan khibrad iyo xushmad halka ay ku xoojinayaan aqoontooda xuquuq sharciyeed.
Roundtables Beesha: Hogaamiyayaal dhalinyaro ah oo tababaran ayaa abaabulay oo abaabulay kulanno iskudhaf ah oo ka dhex dhaca bulshada dhexdooda. Dhacdooyinkaani waxaa ka mid ahaa dood kooxeed iyo dood, isu keenida hoggaamiyeyaasha bulshada, hoggaamiyeyaasha diinta, iyo kooxaha dhallinyarada firfircoon si looga wada hadlo mowduucyo muhiim ah oo ay soo bandhigeen kaqeybgalayaashu, sida xuquuqda sharciga iyo isla xisaabtanka.
Golayaasha dhalinyarada: Dhalinyar reer Yemen ah oo ka kala socda lix maamul Waxaa loo xushay inay matalaan maamulladooda isla markaana la wadaagaan waaya-aragnimadooda, caqabadaha, iyo guulaha ay midba midka kale wadaagaan. Wakiiladan waxay u soo urureen sidii gole qaran oo ay ku gartaan arrimaha xasaasiga ah ee saamaynaya dhalinyarada dalka oo dhan isla markaana ay u abuuraan qorshooyin u doodid ah oo wax looga qabanayo caqabadaha ugu muhiimsan dhammaan lixda maamul.
The Bedelistayaasha dokumenti ry: Si looga caawiyo dhalinyarada reer Yemen sidii ay u xaqiijin lahaayeen xuquuqdooda intii lagu jiray kala guurka siyaasadeed ee Yemen, EAI waxay la shaqeysay hoggaamiyeyaasha dhalinyarada si loo soo saaro afar Bedeliyaha s filimaan dokumenti ah. Dukumiintiyada 'T he documentary' waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo tusaalooyin dhiirigelin leh oo dhiirigelin kara oo dhalinta Yamaniga ah ee qaadanaya dadaallada si ay ugu abuuraan isbeddel wanaagsan bulshada dhexdeeda. The Bedelistayaasha documenta ry serie s wadanka oo dhan ayaa laga baahin jiray. Bedelistayaasha waa qayb ka mid ah mashruuca XUQUUQ-II, oo ay hirgaliso EAI oo ay maalgaliso Hay'adda Iskaashiga Ganacsiga Bariga Dhexe ee Mareykanka (MEPI). XUQUUQ-II wuxuu ka hadlay meelaha muhiimka ah ee laga hadlay intii lagu gudajiray Shirka Wada-tashiga Qaranka ee Yemen (NDC) iyo kala-guurka siyaasadeed, iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray qodobbada la xiriira dhallinyarada. Qodobbada mudnaanta koowaad ee NDC waxaa ka mid ahaa arrimaha Koonfurta iyo Sa'ada, dastuurka, caddaaladda ku-meel-gaarka ah, dib-u-heshiisiinta qaran, xuquuqaha iyo xorriyadda, dowlad wanaagga, horumarka, iyo arrimaha bulshada, deegaanka, iyo amniga. XUQUUQDA-II howgallada waxaa lagu bartilmaameedsaday lix maamul (Sana'a, Aden, Taiz, Lahj, Hodeida, iyo Hadramout) in ka badan 18 bilood, oo la dhammeeyay Janaayo 2015.
xubnaha dhagaysta kooxdu waxay kordhiyeen aqoontooda ku saabsan hannaanka ku-meelgaarka ah ee Yemen iyo NDC kadib markay dhagaysteen barnaamijyadii barnaamijka idaacadda
rumeysan yahay in dhacdooyinku ay la xiriiraan baahiyaha dhalinyarada
Adeegsadayaasha WhatsApp-ka waxay wadaageen mashruuca PSA ee asalka ahaa
Dhallinyarada dhageysatay idaacadaha EAI waxay si aad ah ugu lug yeesheen bulshadooda iyadoo loo marayo fududeynta kooxaha dhageysiga iyo ka-shaqeynta wax-soo-saarka tiyaatarka si loo sii faafiyo aqoonta xuquuqda aadanaha. Meelaha ogeysiinta adeegga dadweynaha ayaa si ballaaran loogu qaybiyay iyada oo loo marayo kanaalka YouTube-ka ee EAI iyo mashruuca bogga Facebook, kaas oo xilligii mashruucu lahaa 7,103 jecel.
Hooyaday waxay tiri dhiiga shahiidnimada ee naftooda ku waayey fagaaraha ma ahan oo keliya mas'uuliyadda dilka, laakiin mas'uuliyad ayaa saaran hoggaamiyeyaasha bannaanka sidoo kale, maxaa yeelay iyagu waa kuwa iyagu ku riixay barxadda. Hadaanan hada sii wadin, waxaan masuul ka nahay noloshooda insha allah. Erayadaas ayaa igu dhiirrigaliyay inaan dib ugu laabto fagaaraha.	 Safwan Assan
Nabadoon u ololeeya (Filimka Bedemaker)